Iindaba -Imakethi ye-elektroniki ye-graphite iya kugcina imeko ethe chu ethe chu.
Imakethi ye-electrode ye-graphite iya kugcina imeko ethe chu ethe chu.
Nangona imakethi ye-graphite electrode ibikumjikelo weenyanga ezintandathu ukuya phezulu, iinkampani eziphambili ze-graphite electrode zikwimeko yokuqhekeka ngenxa yokunyuka kwezinto ezibonakalayo. Kweli nqanaba, uxinzelelo lweendleko zemarike ye-graphite ye-electrode ibalulekile, kwaye ixabiso le-graphite electrode liza kuqhubeka nokunyuka okuthe chu. Izinto ezichaphazela ezi zinto zilandelayo:
1. Uxinzelelo lweendleko: Izinto zangoku ze-graphite electrode ezilungelelanisiweyo zilungelelaniswa rhoqo, kwaye izinto ze-graphite electrode zise-sulphur coke petroleum, inaliti coke. Ixabiso le-coke ecwecwe kunye ne-pitch ziye zagcina imeko inyuka iyonke, kwaye uxinzelelo lweendleko zentengiso ye-graphite electrode ngokucacileyo iphezulu .. Phantsi koxinzelelo, iinkampani ze-graphite electrode kufuneka zonyuse amaxabiso ukugcina intsalela yentlawulo.
Iinkampani ze-elektroniki ze-Graphite ezinama-graphite zinokulinda kwaye ubone imo kwimveliso
Unikezelo lwezixhobo ezithile lwendawo luxinene.
Control 3, Ulawulo lwababini lokusetyenziswa kwamandla kwi-Inner Mongolia.
The 1） Emva koMnyhadala weNtwasahlobo, imarike yensimbi yombane yentengiso yentsimbi isekwinqanaba eliphantsi. Ezinye izixhobo zokusila zentsimbi zisenazo izitokhwe ze-graphite electrode ezingakhange zisetyenziswe, kwaye izixhobo zentsimbi zinomsebenzi ophakathi ekuthengeni i-graphite electrode.
） 2, Njengoko ixabiso grafayithi electrode izinto ekhulayo nangoku, kwaye ngenxa unikezelo ezixineneyo ultra-high-amandla iinkcukacha ezincinane kunye naphakathi-kwimarike grafayithi electrode, kwimarike esezantsi ngokuthe ngcembe ukwamkela ukwanda okuqhubekayo grafayithi amaxabiso e-electrode.
） 3, kwimarike yokuthumela ngaphandle i-elektrode, ukuthuthwa kwempahla kuphezulu ngoku kutsha nje, kwaye i-graphite electrode yokuthumela kwelinye ilizwe iphantsi kwezithintelo ezithile.
Imbonakalo yentengiso: Okwangoku, phantsi kwemeko yokuba kukho imeko elungileyo kwicala lemfuno zorhwebo lwe-graphite electrode, ixabiso le-graphite electrode liza kunyuka ngokuthe ngcembe njengoko ixabiso lezinto ezingafunekiyo linyuka ngenxa yokunyuka okuqhubekayo kwexabiso.